Multiplayer Multiplayer maro ho an'ny olom-pirenena Afrikana, mpikaroka ary mpanamboatra politika mba hanome valiny haingana manodidina ny COVID-19 - AfricaArXiv
navoakan'ny DialogShift & AfricaArXiv on 8th May 2020 8th May 2020
Ny fanombohan'ny Alemanina DialogShift ary fitahirizan-tsoroka miorim-paka amin'ny Afrikanina AfricArXiv mamolavola chatbot fiteny maro ho an'ny olom-pirenena Afrikanina, mpikaroka ary mpanamboatra politika mba hanome valiny haingana manodidina ny COVID-19.
Ny pandeman'ny coronavirus dia nanenika izao tontolo izao tamin'ny hery mahery vaika. Ny ankamaroan'ny olona dia sarotra ho an'ny fitazonana ny fijerin'ny toe-javatra misy ankehitriny ary mihoatra ny zavatra rehetra manahy ny fahasalamany manokana. Ny vondrona hopitaly any Berlin Vivantes dia nampihatra chatbot Covid-19 tao amin'ny tranonkalany tamin'ny martsa 2020. Ny chatbot dia mamaly fanontaniana 1000 isan'andro isan'andro amin'ny fiteny maromaro (Alemanina, Anglisy, Tiorka, Rosiana ary Arabo) ary manodidina ny famantaranandro. Ny fahaizan-javakanto-kanto, miaraka amin'ny mety hametrahana fanontaniana amin'ny alàlan'ny resaka, mamaly ny fanontaniana mifandraika indrindra momba ny otrikaretina, mahafeno ny marary amin'ny alàlan'ny rafitra manam-pahaizana ary manome tolo-kevitra manokana momba ny hetsika.
Ny mpanampy amin'ny virtoaly toy ny chatbots dia manana fahaiza-manao lehibe, satria misy 24/7 izy ireo ary mamaly ireo fanontaniana fototra amin'ny fiteny samihafa. Ny famindrana vaovao tsotra sy haingana dia manampy ny olom-pirenena sy ny marary, indrindra amin'izao fotoana tsy fahatokisana izao.
Olga Heuser, Dialogshift PDG
Ny chatbot COVID-19 dia manome fampahalalana eo noho eo amin'ny aretina sy ny soritr'aretina iraisana ary koa ny fampahalalana fanampiny, azo itokisana sy voafaritra amin'ny faritra. Mandritra ny dingana iray volana, hanara-maso akaiky ny fanontanian'ireo mpitsidika ny tranokalanay izahay ary hampifanaraka ny valin-teniny.
Ireo chatbots amin'ny alàlan'ny famolavolana dia rafitra fifanakalozan-dresaka izay miasa ho an'ny mpampiasa ny fiteny voajanahary ho an'ny mpanome data sy mpamatsy serivisy. Amin'ny alàlan'ny fampidirana ity chatbot ity ao amin'ny tranokala AfricaArXiv dia ahafahan'ny ekipanay hanamora kokoa ny fidirana amin'ny fotoana mahamety sy mahomby amin'ny fampahalalana mifandraika amin'ny mpikaroka momba ny siansa afrikana momba ny COVID-19 ary ny fomba hanampiana azy ireo tsara amin'ny fampahafantarana ny voka-pikarohana ataony ho an'ny manam-pahaizana eran-tany. resaka sy dinika.
Luke Okelo, Oniversite Teknika any Kenya [ORCID iD]
Amin'ny alàlan'ny Natural Language Processing (NLP) amin'ny fampiasana ny Google Translate, ny chatbot dia misy amin'ny fiteny 100 mahery, toy ny Afrikaans, arabo, Amarinth, Chichewa, anglisy, frantsay, aleman, Hausa, Hindi, Igbo, Malagasy, portogey, sesotho, Somali, Sunda , Swahili, Xhosa, Yoruba, ary Zulu. Mandritra ny dingana voalohany, handrehantsika ny fahamarinan'ny fandikana ny teny afrikanina isika ary mitady valin-teny avy amin'ireo mpitsidika anay mba hahafahantsika manatsara ireo fandikan-teny amin'ireo ankamaroan'ireo ampiasaina amin'ity tranga ity. Mifandraisa aminay raha tianao ny manampy anay hampiditra fiteny afrikanina bebe kokoa amin'ity lisitra ity, na raha resaka hevitra, fanontaniana na olana.
Momba ny DialogShift
DialogShiftNy fifanakalozan-kevitra AI Platform dia ahafahan'ny orinasa sy fikambanana manamboatra traikefa amin'ny resaka fifanaovan-dresaka mivantana sy automatique amin'ny fitaovana marobe ary mamela ny fifandraisan'ny mpanjifa na mpampiasa azy amin'ny alàlan'ny hafatra (bots) amin'ny endriny samihafa.
AfricArxiv dia arsivika dizitaly tarika ho an'ny orinasam-pikarohana afrikana. Manome sehatra tsy mitady tombombarotra izahay handefasana taratasy miasa, fanomanana, sora-tanana ekena (lahatsoratra-pirinty), fampisehoana ary angon-drakitra amin'ny alàlan'ny sehatra mpiara-miasa. Ny AfricaArxiv dia natokana hanao fikarohana sy fiaraha-miasa eo amin'ireo mpahay siansa afrikanina, hanatsarana ny fahitana ny famoahana fikarohana Afrikana ary hampitombo ny fiaraha-miasa eran-tany.
Sokajy:	fiaraha-miasaCovid-19Fifandraisana ara-tsiansa